PressReader - Isolezwe: 2018-02-15 - UMashaba usehoxile okhethweni lweSafa
UMashaba usehoxile okhethweni lweSafa
Isolezwe - 2018-02-15 - EZEMIDLALO - MTHOKOZISI MNCUSENI
UMQEQESHI weBafana Bafana osahamba phambili ngokuba nerekhodi elimhlophe eqenjini lesizwe laseNingizimu Afrika, u-Ephraim “Shakes” Mashaba, ushaye ungqimphothwe ngokubangisa umengameli weSouth African Football Association (Safa), uDanny Jordaan, okhethweni lokuphatha inhlangano.
Ngokusho kweSafa, uMashaba nabanye bebemelwe ukuba sebezifakile izicelo zokungenela ukhetho ungakashayi uFebhuwari 24. Ngaphandle kukaMashaba osephumile embangweni ayabalwa namagama kaMwelo Nonkonyana, Lucas Radebe, Ace Ncobo, Tokyo Sexwale.
Kubona bonke akekho oseke waphumela obala ukuthi uphakanyiswe wubani noma kambe bayakwamukela noma bayakuchitha ukuphakanyiswa kwabo.
UMashaba, obephakanyiswe yigatsha laseGauteng leSouth African Masters and Legends (SAML), ngeke esaqhubeka nalokhu, ngokusho kokhulumela lolu hlaka u-Irvin Dire.
Abazazi kangcono bebevele besho ngeledlule ukuthi bonke abafisa ukungenela ukhetho kumele bahlale bazi ukuthi baphelezela uJordaan ngoba imigomo yokungenela ibakhahlelela ngaphandle.
Ngokusho kukaDire, okwenza uMashaba ahoxe wukuthi bathe uma sebehlanganisa kahle amakhanda kwabacacela ukuthi umkhankaso wabo bawuqale isikhathi sesihambile. Lokhu kuvunyelwane ngakho ngoLwesihlanu emhlanganweni ophuthumayo obubizwe wuhlaka lwezinkakha zaseGauteng, uMashaba angusihlalo walo.
“Bonke esibazisile ngesifiso sethu njengamazinga aphansi ebhola lapha eGauteng bakhombise enkulu intshisekelo ngokungena kukaMashaba ekuphathweni kwebhola. Bebengaphezulu kukahhafu wama-LFA esinawo lapha eGauteng abebekujabulela ukuphakamisa kwethu uMashaba okuyinto ekhuthazayo.
“Ngokuzayo kumele sisheshe sikwenze okufanele sikwenze. Ngikusho lokhu ngoba abamaLFA bakhombisa intshisekelo ngoMashaba nje kodwa abazange basifihlele ukuthi sisindwe yizinyawo ngoba bese bevele beliphakamisile igama likamengameli abamfunayo,” kusho uDire.
Akufihliwe ukuthi uMashaba uhoxa nje, kuvelile ngeledlule ukuthi izikhulu eziphezulu zeSAML, ziholwa uBuddha Mathathe, zikucacisile ukuthi kazeneme ngokuphakanyiswa kwalo mqeqeshi (uMashaba) ngoba zona zihamba noJordaan.